distrikan’Atsimondrano raha nanokatra ny pôketrany. Efa tsy tao amin’ny toerany intsony mantsy ny taratasim-bolany sy ny volany rehetra niampy taratasy sy kojakoja maro samihafa fa lasan’ny mpangarom-paosy. Araka ny fanazavany, tsy hitany na reny akory ny nanokafan’ireo tsy mataho-tody ny pôketrany. Tsy niantsena na nividy zavatra anefa izy fa nandeha tsotra fotsiny saingy nandalo tsena be olona nifamezivezy kosa. Tsy nisy vola intsony tany aminy na dia ny hataony saran-dalana hiakatra hamonjy asa tany an-drenivohitra aza. Tokony ho malina hatrany isika rehetra manoloana ny tranga tahaka itony. Efa tsy misy toerana tsy ahitana mpangarom-paosy intsony mantsy eto amintsika amin’izao, eny fa na dia any ambanivohitra toa an’Itaosy aza.